ထိပ္တန္းကားကုမၸဏီ Glucky Holdings က စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ - Pandaily
Categories: Industry ကိုPandaily စက်တင်ဘာ 28, 2021 စက်တင်ဘာ 28, 2021 မှာ Posted
Glucky Holdings အုပ္စု၏ ဥကၠ႒ လီကြမ္ယုက ကုမၸဏီသစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ဝူဟန္စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎၏ စမတ္ဖုန္းလုပ္ငန္းသစ္ဟူဘေးပြည်နယ်အစိုးရက အင်္ဂါနေ့တွင် Weibo မှတဆင့် ကြေညာခဲ့ပြီး.
သည်စီမံကိန်းဟာ တရုတ်အလယ်ပိုင်း WEDZ အခြေစိုက်တန်ဖိုးကြီးစမတ်ဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် အရင်းအမြစ်များ ပေါင်းစပ်သိရှိနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်။
လီကွမ်ယူက “စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အိတ်ဆောင်မိုဘိုင်းလ် Terminal တွေမှာသာမက ဆော့ဖ်ဝဲပိုင်းတွေမှာပါ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ၊ ဖုန်းလိုင်းတွေရဲ. တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ရလဒ်တွေကို မျှဝေကြပြီး သုံးစွဲသူတွေကို အမြန်ဆုံး ဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ ရလဒ်တွေ ရရှိစေမှာဖြစ်သလို ကားရဲ. app တွေဘက်ကို ရွေ့လျားစေ၍ ကားတွေနဲ့ smart phone software နည်းပညာတွေကို အနီးကပ်ထိတွေ့အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္ မာနည္းပညာႏွင့္ nbsp; Glucky ဟာ လက်ရှိမှာ တရုတ်ထိပ်တန်း ကားထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ supply chain တွေ၊ လိုင်းပြည့်စုံတဲ့ လုပ်သားတွေကို ရွေးချယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Glucky ဟာ တဖက္မွာလည္း သူ႔ကိုယ္သူ စမတ္ဖုန္းေတြ ထုတ္လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေစာေစာကPandaily က စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းပို႔Glucky ဥကၠ႒ Lee Book Fu-won က စမတ္ဖုန္းမ်ား တည္ေဆာက္လုိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ တုိးတက္မႈ ျမန္ဆန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဲဒီအခ်ိန္က သူဟာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲမွာ အရည္အခ်င္းေတြ ရွာေဖြဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီကေတာ့ Hubei, Shanghai နဲ႔ အျခားေနရာေတြမွာေတာင္ ျပည္ပမွာ ႐ုံးခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
အများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ လီကွမ်ယူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် Hubei Narmonic Technology Co., Ltd ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပိုင်းအခြားများတွင် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများနှင့် Field Research, Automotive Electronic Product, Information Systems Integrated Service စသည်တို့ အများအပြား ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အျပင္ Glucky ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ထပ္ ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ ေဒတာနည္းပညာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။
Topics: မြင်ကွင်းXiaomi ကားဝယ်စီးနိုင်တဲ့ Bogward, Beijing နဲ့ Buhan Double မော်ဒယ်ကားစက်ရုံကို တည်ဆောက်မည်
လတ်တလောနှစ်တွေအတွင်းမှာ ကားနဲ့စမတ်ဖုန်းလုပ်ငန်းတွေအကြား ချိတ်ဆက်မှုကလည်း ပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မတ္လ၊Xiaomi က လယ်ကွင်းသို့ ကားဖြင့် ချီတက်မည်ဟု ကြေညာယခုအခါ ျပည္တြင္း၌ ကားထုတ္လုပ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားသည္ ယြမ္ေငြ သန္း ၁၀၀ (၁၅၄၈ ဒသမ ၁ သန္း) ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။